သားမီးလေးတို့အကြောင်း တစေ့တစောင်း(၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » သားမီးလေးတို့အကြောင်း တစေ့တစောင်း(၁)
Posted by ဦးဦးပါေလရာ on Aug 3, 2013 in Society & Lifestyle | 51 comments
ဤပိုစ့်သည် sexual orientation အကြောင်း ဖြစ်ပါသောကြောင့် မြန်မာ့မျက်စေ့/နား တို့ဖြင့် ကြားရဖတ်ရရိုင်းသည့် အသုံးအနှုံးများပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် သည်းခံကြပါရန် တောင်းပန်ပါသည်။ အဆိုပါ အသုံးအနှုံးများကို ရှောင်၍၊ ဖေါ့၍၊ သွယ်ဝိုက်၍ ရေးလျှင် တိကျရှင်းလင်းသော အဓိပ္ပါယ် မရနိုင်သောကြောင့် ထည့်သွင်းရေးသားရပါကြောင်း။
လောလောဆယ် အင်တာနက်သုံးရ အင်မတန်ခက်နေပါသောကြောင့်၊ ဤပိုစ့်ကို ဝင်ရောက်ဆွေးနွေး မှတ်ချက်ပေးသည်များရှိပါလျှင် ၊ အချိန်မီ ပြန်လည်ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းမရှိပါက၊ အပြည့်အစုံ ပြန်လည်ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းမရှိပါက ၊ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါရန် ပန်ကြားအပ်ပါကြောင်း။)
မိန်းမစိတ်ရှိနေတဲ့ ယောက်ျားတွေ တနည်းအားဖြင့် မိန်းမလျာတွေအပေါ် လူတကာတို့ရဲ့ အမြင်၊ အထင် လေးတွေကို ဘဝင်မကျနိုင်လွန်းလို့…
ပြီးတော့ ဒီကိစ္စကလဲ ဘာမှမဖြစ်သယောင် အိညောင်အိညောင်နဲ့ ကျုပ်တို့လူ့ဘောင်လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကို ထိခိုက်နစ်နာပျက်စီးစေနိုင်ရာ အကြောင်းတွေရှိနေလို့ ဒီပိုစ့်လေးရေးဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ကျုပ်က အတိုက်အခံပြောချင်တာက…..
အဲ… နေစမ်းပါဦး ဦးပါလေရာရဲ့…
ဘယ်သူတွေနဲ့ အတိုက်အခံလုပ်မလို့လဲ …
ကျုပ်တို့မြန်မာ့လူ့ဘောင်အသိုင်းအဝိုင်းက လူများစုရဲ့ အထင်အမြင်တွေနဲ့ပါ……။
အဲသည်တော့ .. ပထမဆုံးတော့ ဟိုဖက်က မောင်အာဂရဲ့ အင်တာဗျူးပိုစ့်လေး
(http://myanmargazette.net/182145)မှာပါတဲ့ မကြီးစန်းရဲ့ စကားလေးကို ငြင်းပါမယ်။
မကြီးစန်းတို့လိုလူမျိုး …..။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဆန်ကုန်မြေလေးဖြစ်ပါတယ်။ ယောကျင်္ားမပီသပါဘူး။ မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကို မပိုင်ဆိုင်ဘူး။
ဒါကတော့ မိတ်ကပ်ခင်စန်းဝင်းက ယဉ်ကျေးစွာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိမ်ချပြီးပြောထားတာပါ။
မကြီးစန်းတို့လို မိန်းမလျာ ဆိုတာ ဆန်ကုန်မြေလေးမဟုတ်ပါဘူး…။
ဆန်ကုန်မြေလေးဆိုတာ လူ့ဘောင်လူ့လောက လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် အကျိုးမရှိ အသုံးမကျတဲ့သူကို (ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ် မိန်းမဖြစ်ဖြစ် ဂေးဖြစ်ဖြစ်)ခေါ်တာပါ။
ကိုယ့်ဝန်းကျင် ကိုယ့်မိသားစု ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့တကွ လူ့ဘောင်လူ့လောက လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အကျိုးရှိရှိ အသုံးကျကျ နေထိုင်လုပ်ကိုင်သူဆိုရင် (ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမဖြစ်ဖြစ်၊ ဂေးဖြစ်ဖြစ်) အဖိုးတန်တဲ့လူလို့ပဲ သတ်မှတ်ရပါမယ်။
မကြီးစန်းတို့လို မိန်းမလျာဆိုတာ မြင့်မြတ်တဲ့ (ယောက်ျား) ဘဝကို မပိုင်ဆိုင်ဘူး…. ဆိုတာကိုလဲ
မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာ ရုပ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်၊ စိတ်က ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ် ဆိုတာနဲ့မဆိုင်ဘူး…
မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့် ၊ စာရိတ္တရှိရင် ဘယ်သူမဆို မြင့်မြတ်တယ်..။
ယုတ်ညံ့တဲ့ အကျင့်၊ စာရိတ္တရှိရင် ဘယ်သူမဆို (ဘယ်သူမဆို) ယုတ်ညံ့တယ်..။
မြင့်မြတ်တယ် / ယုတ်ညံ့တယ် ဆိုတာ
သီလ အခြေအနေပြ အညွှန်းကိန်းဖြစ်တယ်…
မွေးရာပါပစ္စည်းရဲ့ အခြေအနေပြ အညွှန်းကိန်း မဟုတ်ပါ…
လုံးဝ … လုံးဝ …. မဟုတ် လေပါ။
ငယ်စဉ်ကတည်းက မိန်းမစိတ်ဖြစ်နေရင် ဘာမှမတတ်နို်င်ဘူး… ဆိုတဲ့ အထင်အမြင်များ……။
မွေးကတည်းက မိန်းမစိတ်ဖြစ်တဲ့သူဆိုတာ ၊ သူ့ ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ဟိုမုန်းအနေအထား အချိုးအစားကြောင့်ဖြစ်တာ။ အဲဒါကတော့ (ဆေးပညာနဲ့မပြုပြင်ရင်) ပြင်လို့မရဖို့များတယ်။ အသေးစိတ်က စာအုပ်တွေထဲမှာရှိပါတယ်။ ကျုပ်မအားလို့ ရှာမပေးနိုင်တဲ့အတွက် လိင်တူချစ်သူတယောက်ယောက်ကို မေးနိုင်ပါတယ်။
ကျုပ်ပြောချင်တာက အဲသလို မွေးကတည်းက မိန်းမစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဦးရေဟာ ကလေးဘဝမှာ မိန်းမစိတ်ပေါက်တဲ့ဦးရေရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာဖြစ်တယ်။
ကလေးဘဝမှာ မိန်းမစိတ်ပေါက်တဲ့ အခြားအမျိုးအစားတွေရှိသေးတယ်-
-မိန်းမတွေကိုအားကျလို့ ၊ သဘောကျ လို့ …
-အထက်အောက် မွေးချင်းတွေက မိန်းကလေးတွေဖြစ်လို့ ….
-ကစားဖေါ်များအပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်က မိန်းမတွေ အရမ်းများလို့ ….
-အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုကြောင့် ယောက်ျားဖြစ်ရမှာကြောက်သွားလို့ ….
-ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါ (ဥပမာ-အတက်ရောဂါ) တစ်ခုခုကြောင့် စိတ်နေစိတ်ထား စံလွဲသွားလို့ …
-ပတ်ဝန်းကျင်က အထူးသဖြင့် အပျိုကြီး၊ အဖွားကြီး တွေက ဝိုင်းလှုံ့ဆော်လို့ ….
စတဲ့… စတဲ့.. အချက်တွေကြောင့်လဲ ကလေးယောက်ျားလေးတွေဟာ မိန်းမစိတ်ပေါက်၊ မိန်းမလိုဖြစ်ချင်၊ မိန်းကလေးလို နွဲ့ သွားတတ်ပါတယ်။
အဲဒါမျိုးက အရမ်း အရမ်း များပါတယ်…။
အဲဒါမျိုးတွေကို သေချာပေါက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ ရပါတယ်။
မိဘက မပြုပြင်ပေးပဲထားရင်လဲ အသက်အရွယ်တစ်ခုမှာ တဖြေးဖြေး ယောက်ျားဆန် ယောက်ျားနဲ့တူသွားတတ်ပါတယ်။
ကျုပ်ငယ်ငယ်က ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဟာ
အထက်အောက် အမ ညီမ တွေကြားမှာနေရင်း ခပ်နွဲ့နွဲ့နဲ့ မိန်းမလျာလို ဖြစ်သွားပါတယ်။
အဲဒါ သူ့အဖေက စိတ်ပျက်ပြီး စစ်တပ်ထဲ သွားပို့ပါတယ်။
အဓမ္မ ပို့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်ထဲဝင်ချင်အောင် အမျိုးမျိုးသွေးဆောင် ဖျောင့်ဖျပြီး ပို့တာပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ရှစ်နှစ်လောက်မှာတော့ အဲသည်သူအကြောင်းပြန်သိရပါတယ်။
တပ်မတော်အရာရှိကြီးအဖြစ်က – အရပ်ဖက်ပြောင်း- အရပ်ဖက်အရာရှိကြီးဖြစ်
ဇနီး + သားသမီး လေးယောက်နဲ့ ဘီယာဗိုက်ကြီးတစ်လုံး ပိုင်ဆိုင်နေပါပြီ…။
ကေတီဗွီတွေမှာလဲ မင်းသား ဖြစ်နေပါပြီ…။
အဲသည်တော့.. သူငယ်ငယ်က သူ့မှာရှိတဲ့ ကနွဲ့ကလျ မိန်းကလေးစိတ်က ဘယ်ရောက်သွားသလဲ ????
(အဲသည်ကောင် သူ့အဖေကို ဘယ်လောက်တောင် ကျေးဇူးတင်နေမယ်ထင်သလဲ….)
အဲသည်လို နမူနာတွေ များမှများ…….။
ကိုယ့်သားကလေး နွဲ့နေရင် ၊ မိန်းကလေးစိတ်ဖြစ်နေရင်
အဲဒါကို- နှိပ်စက် ညှင်းပမ်း ခြိမ်းခြောက် အကျပ်ကိုင်ခြင်းမပါပဲ
သူ့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ဘဝခရီးအတွက် သင့်လျှော်သလို ပြင်ဆင်ပေးနိုင်တာပေါ့….။
မိန်းမလျာလဲ လူပဲ။ တန်ဘိုးရှိတဲ့သူဖြစ်အောင်နေထိုင်တတ်သွားရင် တန်ဘိုးရှိတဲ့ မိသားစုဝင်ကောင်း၊ နိုင်ငံသားကောင်းဖြစ်မှာပဲ။
အဲဒါ ဂေးသမာကျမ်းစာ၊ ဂေးပိဋကတ် တွေမှာပါသလို
ငယ်စဉ်က ဂေးစိတ်ပေါက်ရင် ပြင်မရတော့ဘူး၊ မတတ်နိုင်ဘူး… တို့
လိင်စိတ်ကိုမထိန်းချုပ်ရဘူး( ×င်ခံပေ့စေ) လွှတ်ထားရမယ်… တို့
ဘာတို့ညာတို့တွေကို အဟုတ်မှတ်ပြီး မသေမချာပဲနဲ့ လွှတ်ထားလိုက်ရင်
ကိုယ့်သားသမီး လမ်းဘေးမှာ ကလေကချေဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။
မိန်းမလျာဖြစ်ရုံ၊ မိတ်ကပ်လိမ်းရုံ၊ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးရုံ၊ ထမီဝတ်ဘော်လီဝတ်ရုံကတော့
လုံလုံခြုံခြုံ အိန္ဒြေရရ လုပ်လို့ ရတယ်…..
လိင်စိတ်ကိုမထိန်းချုပ်လို့ . လိင်တူဆက်ဆံရတော့မယ်ဆိုရင်တော့
အိမ်မှာ ×င်ခံဖို့ မဖြစ်နို်င်ပါကြောင်း…..။
လမ်းဘေး၊ မြောင်းကြားခြုံကြားမှာပဲ တွေ့ကရာလူနဲ့ ဆက်ဆံရတော့မှာဖြစ်လို့
ကလေကချေ အခြောက်ဘဝ ကျရောက်သွားတော့မှာဖြစ်ကြောင်း…..။
ကိုယ့်အမြီးပြတ်တိုင်း သူများအမြီး ပြတ်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးနေတဲ့
အခြောက်ဆိုး အခြောက်ညံ့တွေစကား နားမယောင်ကြပါစေနဲ့… လို့
(ပြောင်းဖူးရိုး၊ ရေသန့်ဗူးတို့၏ အခြေအနေကိုကြည့်၍ ဆက်သင့်က ဆက်ပါမည်)
ကြာ ညောင် says:
ဦးပါလေရာရေ့.ကောင်းပါ့ဗျား.ကောင်းပါ့ ။
မနေသာလို့ သိသလောက်လေး ဝင်ရေးတာပါကိုရင်ရေ
ကျုပ် သိဂျင်တဲ့ တစ်ချက် ချိဘာဒယ် …
ဟို အပေါ်က x ဆိုဒဲ့ နေရာဒွေဘာဘဲ ….
အိုက်ဒါကို ဘယ်လို ဘာဒါပျံရမလဲ ခည ….
ဟီဟိ …. (နောက်ဒါနော် .. ဥဥပါ)
အင်း ဘယ်လို ပြောရမလဲတောင် မသိဘူး။ ဒါကို အကြောင်းတခုလုပ်ပြီး ပြောနေရတာတောင် သိပ်မကောင်းလှဘူးလို့ ထင်တယ်။ ဒီကိစ္စမှာ ကျနော့် အမြင်ကတော့ စောစောက ပြောခဲ့သလိုပဲ sympathy ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကို promote လုပ်ပေးဖို့တော့ မလွယ်ဘူးထင်တယ်။
ဆိုလိုတာက ကဲ ယောကျာင်္းတယောက် မိန်းမစိတ် ပေါက်နေပါပြီတဲ့။ ပြင်လို့မရလို့ သူ့ဘာသာသူ မာမရှိန်း ဖြစ်နေပြီ ဆိုပါတော့။ သူလဲ လူသားတယောက် အနေနဲ့ အသက်ရှင် ရပ်တည်ခွင့် ရှိတာမို့ သူ့ကို မလှောင်ပါနဲ့ မပြောင်ပါနဲ့ ခဲနဲ့ပေါက်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့ ဆိုရင် လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကို သီးသန့်လူတန်းစား အနေနဲ့ လက်ခံပေးရမယ် ကိုယ့် သားသမီးထဲမှာ ငယ်ငယ်က အဲဒီဘက်ကို နည်းနည်းယိုင်တဲ့လူ ပါလာရင် မိဘအနေနဲ့ မပြုပြင်ရဘူး ဆိုတာတော့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် promote တော့ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ နှိမ်စရာလည်း မလိုပါဘူး။
ကဲ နောက်တခုက ရှေးရိုးစွဲလေးဘက်ကို နည်းနည်းသွားရအောင်။ ဒီနေရာလေးတော့ ဦးဦးပါလေရာနဲ့ ကျနော် သိပ်သဘော မတူဘူး။ ဒါကတော့ ကျနော့် အမြင်သက်သက်ပါ။ မြင့်မြတ်တယ် ယုတ်ညံ့တယ် ဆိုတာ တချို့နေရာမှာတော့ သီလ အခြေအနေကို ပြတာတင် မဟုတ်ပဲ မွေးရာပါ ပစ္စည်းရဲ့ အခြေအနေကိုလည်း ပြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျနော့် အမြင်ပါ။ မှားနိုင်ပါတယ်။
ဆိုပါတော့ ကျနော်တို့ ဘာသာရေး အရပဲ ဆိုပါတော့။ ရဟန်းခံတာနဲ့ စမေးပါပြီ။ လူသားစင်စစ် ဖြစ်ပါရဲ့လားလို့ မေးပြီးတာနဲ့ ဆက်လိုက်လာမယ့် မေးခွန်းက ယောကျာင်္းစင်စစ် ဖြစ်ပါရဲ့လား ဆိုတာပါ။ ယောကျာင်္းစင်စစ် ဖြစ်သူများအတွက် ဘိက္ခူသာသနာ မိန်းမစင်စစ် ဖြစ်သူများအတွက်က ဘိက္ခူနီသာသနာ ထားပေးပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဟိုမရောက် ဒီမရောက်တွေ အတွက်တော့ မထားပေးသလို ဘယ်အစုထဲကိုမှ ဝင်ခွင့်မပေးပါဘူး။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ အန္တရာယ် များလွန်းလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားစင်စစ် ဖြစ်မယ်လို့ နိယတဗျာဒိတ် ရပြီးသား ဘုရားအလောင်းတွေဟာ နပုန်းပဏ္ဍုတ် လုံးဝ မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဒီတော့ ဒီမိန်းမလျာဆိုတဲ့ အခြေအနေဟာ အကောင်းဆုံး အခြေအနေ တခုမဟုတ်ဘူးလို့ပဲ ယူဆပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ချွင်းချက် အနေနဲ့ကတော့ ဗုဒ္ဓအလောင်းအလျာမှ လွဲပြီး ကျန်တဲ့ သာဝက အရင့်အမာ ကြီးများတောင် အကုသိုလ် အကျိုးပေးရင် ဒီဘဝကို ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ရှင်အာနန္ဒာဟာ ကမ္ဘာတသိန်း ဖြည့်ပြီးသား ပါရမီ ရှိပေမယ့် ကာမေသုကို တခါကျူးလွန်ခဲ့လို့ ဒီဘဝကို ရောက်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့ကို အထင်မသေးပါနဲ့ မလှောင်ပါနဲ့ ဆိုရင် အလွန်ကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ အကောင်းဆုံး ဘဝအခြေအနေ မဟုတ်ဖူးလို့တော့ ယူဆပါကြောင်း။ ပြင်နိုင်ရင်တော့ ကောင်းပါကြောင်း။ မပြင်နိုင်ရင်တော့ တတ်နိုင်သမျှ လူ့လောက အကျိုးဆောင်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ အနှောင့်အယှက် မပေးပဲ နေနိုင်ပါကြောင်းပေါ့။
ကိုစံလှကြီးရေ… ဘရာဘိုပါဗျို့.. အမြင်ချင်းတူတယ်…
မှန်တာတွေ လျှော့ရေးပါဗျာ..။ ရွာထဲမှာ အခြောက် သုံးပါးကိုတောင်
အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစားထည့်ချင်တဲ့ ဒူဒွေချိတယ်…
မီများမီးနိုင် ရေများရေနိုင်ပါဗျို့…။ ဆတူထည့်ရင်တော့
ကိုရင်စည်သူရေ ဟုတ်တယ်ဗျို့။ ကျနော်တော့ အလကားနေရင်း ထပ်ပြီး အမုန်းခံရဦးမယ် ထင်တယ်။ ဒါကလည်း ဦးဦးပါလေရာ ပို့စ်မို့လို့ပါ။ တခြားလူ ဆိုရင်တော့ ဒီလိုပြီး ကျနော်ဝင်ပြီး ပြောဖြစ်ဖို့ မသေချာပါဘူး။ ကျနော်ကလည်း ကျနော့် အယူအဆ အတိုင်းရေးတာပါ။ ကျနော့် အမြင်ကတော့ ဒီမိန်းမလျာ ဘဝဆိုတာ သိပ်ပြီး ဟန်ကျတဲ့အလုပ် ကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ မထင်ပါဘူး။ ဒီလိုပြောလို့ သူတို့ကို စစ်ဆင်ရေးကြီးလုပ်ပြီး နှိပ်ကွပ်ရမယ် ပက်ပက်စက်စက် ဖိနှိပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ သဘော မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့လည်း သူတို့ဘာသာ နေပါစေပေါ့။ ဒါပေမယ့် ပြောင်းလဲနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါ။ မပြောင်းလဲနိုင်ရင်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အနှောင့်အယှက် မပေးပဲ တတ်နိုင်သမျှ လူ့အကျိုးဆောင်ပြီး နေနိုင်တယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် မြင့်မြတ်တယ်လို့တော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မထင်ပါကြောင်း။
ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာ သူ့သာသနာမှာ လူတိုင်းကို ဝင်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်နော်။ ကုန်ကုန်ပြောမယ်။ နောက်ဆုံး မစင်ကျုံး အမှိုက်ကျုံးရတဲ့ လူ့အောက်တန်းစားတွေတောင် မင်းမျိုး သူဌေးမျိုးတွေနဲ့ တန်းတူ ရဟန်းဖြစ်ခွင့်ကို ပေးခဲ့တယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် ဒီနပုန်းပဏ္ဍုတ်တွေ ဆိုရင်တော့ ဝင်ခွင့်မပေးခဲ့ဘူး။ ရဟန်းခံမယ့်လူကို သေသေချာချာကို စိစစ်တော့တာပဲ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူတို့သည် ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်တယ်လို့ မဟုတ်ပေမယ့် သဘာဝတရားနဲ့ ကန့်လန့်ဖြစ်နေလို့ အစစ်တွေရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြဿနာ ဖြစ်လာနိုင်လို့ပါပဲ။ ဒီလိုပြောလို့ သူတို့ကို ရှုတ်ချသလိုတော့ ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် မတတ်နိုင်ပါ။
တခု ဆန်းနေတာက သဂျီးပဲဗျ။ ဟိုဘက်ပို့စ်က ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂေးလို့ ဝန်ခံထားတဲ့ လူတယောက်ရေးတဲ့ ပို့စ်ထဲမှာ ကိုကြောင်ကြီးက သူ့ကို အဲဒီ ဂေးကို စားချင်လို့ ဉာဏ်ဆင်နေတယ်လို့ ပြောတော့ ကျနော်က သက်သက် နောက်တယ် ထင်နေတာ။ ဟော အခု ဒီပို့စ်ကျတော့ အဲဒီကိစ္စကြီးဟာ မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ရောမအင်ပါယာတွေရော အော်တိုမန် အင်ပါယာတွေရော ထည့်ပြီး ကွန်မန့်ပေးနေတယ်ဗျို့။ ကိုကြောင်ကြီး ပြောတာ ဟုတ်နေသလား မသိဘူး။ သူပြောနေပုံက အဲဒီဂေးတွေကြားအောင် သက်သက် စကားခေါ်သလို ဖြစ်နေတယ် ဟီး။
ကိုစံလှကြီးရေ.. ဂေလ်းကို မြင့်မြတ်ဒယ်.. စစ်မြေပြင်မှာ ငတ်တုန်း သူရို့ချင်းစိတ်ဖြေတဲ့ဟာကို သူရဲဂေါင်းတွေတောင် တူတူအဝှာပြုခဲ့တယ်
ဆိုနေတာက… သမိုင်းပြု အားပေးသလိုများဖြစ်နေသလား..
ဂေးလ်တွေကို နှိမ့်လည်းမချချင်ပါဘူး… လူ့စည်း ဘီလူးစည်းလေးနဲ့နေရင်
အကောင်းဆုံးပါ။ မြန်မာပြည်မှာတော့ 99.99% ကတော့.. မကောင်းတဲ့
ဂေလ်းတွေများပါတယ်… ကောင်းတာလေးတစ်ခုကို ကွက်ပုံရိပ်ဖော်ရင်း
တန်းတူ ဆိုသော စကားခေါ်နေရင်တော့.. အဟမ်း.. ဟမ်း..
ရိပ်မိစတော့ ပြုလာပါဘီ… ဟီးးး
ကိုစံလှကြီး ပြောတဲ့ထဲမှာ ကျုပ်နဲ့ သဘောချင်းတိုက်ဆိုင်တာလေးတွေ ဆွဲထုတ်ပြမယ်ဗျ…။
(၁)ကိုယ့် သားသမီးထဲမှာ ငယ်ငယ်က အဲဒီဘက်ကို နည်းနည်းယိုင်တဲ့လူ ပါလာရင် မိဘအနေနဲ့ မပြုပြင်ရဘူး ဆိုတာတော့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။
(၂) နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် promote တော့ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ နှိမ်စရာလည်း မလိုပါဘူး
(၃)အဲဒီမှာ ဟိုမရောက် ဒီမရောက်တွေ အတွက်တော့ မထားပေးသလို ဘယ်အစုထဲကိုမှ ဝင်ခွင့်မပေးပါဘူး။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ အန္တရာယ် များလွန်းလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
(၄)ဒီမိန်းမလျာဆိုတဲ့ အခြေအနေဟာ အကောင်းဆုံး အခြေအနေ တခုမဟုတ်ဘူးလို့ပဲ ယူဆပါတယ်။
(၅)ပြင်နိုင်ရင်တော့ ကောင်းပါကြောင်း။ မပြင်နိုင်ရင်တော့ တတ်နိုင်သမျှ လူ့လောက အကျိုးဆောင်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ အနှောင့်အယှက် မပေးပဲ နေနိုင်ပါကြောင်း
အဲဒီအချက်တွေမှာ တသဘောထဲ ရှိကြောင်းပါဗျာ..။
ကျုပ်တို့ မြန်မာ့လူမှု့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ သူများကို အနှောက်အယှက်မပေးပဲ အေးအေးဆေးဆေး သိုသိုသိပ်သိပ် နေထိုင်နေကြတဲ့ မိန်းမလျာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့ အဲသည် အေးအေးနေတဲ့ မိန်းမလျာတွေကို နန့်တဲ့ ၊ ကဲတဲ့ ၊ လူအမြင်ကတ်အောင် နေတဲ့ ၊ မျက်စိနောက်အောင်နေတဲ့ အခြောက်တွေက လမ်းဘေးထွက်လာအောင် မြူဆွယ် လှုံ့ဆော်တာတွေ များလာပါတယ်။ ဒီပိုစ့်ကလေးကတော့ အဲဒါလေး လူ့စည်း ဘီလူးစည်း ခွဲပြချင်လို့ပါပဲ ဗျို့..
​ပြောင်းဖူးရိုး၊ ရေသန့်ဗူးတို့ ထက်​ ဦးဦးပါ ခဲ နဲ့ လိုက်​​ပေါက်​တဲ့အ​ကြောင်​း​လေးလဲ သိချင်​ပါ​သေးရဲ့ ခင်​ဗျာ :hee:
ကျုပ်လဲ ခပ်မေ့မေ့ ဖြစ်နေပါပြီ
အဲသည်အခြောက်က စလင်းဘက်အိတ်ထဲက ဓါးမြှောင်ထုတ်ပြတာရယ်
သူ့ကိုရိုက်မလို့ စိုက်ပျိုးရေးဝင်းခြံစည်းရိုးက နှစ်တစ်လက်မတစ်ချောင်း ပြေးဆွဲတဲ့ကျောင်းသားကို ဝိုင်းဆွဲတားမြစ်ကြရတာရယ်
နောက်ဆုံး လူငါးယောက်လောက် ဝိုင်းမောင်းထုတ်မှ ပေစောင်းပေစောင်းနဲ့ထွက်သွားတာရယ်
ရှေးရောမက.. အင်မတန်ကြမ်းပြီးစစ်တိုက်တော်ကြတဲ့.. ရောမန်စစ်သားတွေမှာ.. လိင်တူဆက်ဆံသူတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်…
အဲဒီခေတ်က.. မိန်းမဆိုတာ.. ကလေးမွေးပေးတဲ့.. သတ္တဝါအဆင့်ထားကြတာလည်းရှိတယ်လို့.. ဖတ်ဖူးတယ်..။
ဆိုတော့.. လိင်တူချင်းမှာမှ. စစ်ထွက်ယောကျာ်းခြင်း လိင်ဆက်ဆံကြတာပေါ့…။ ပိုမြတ်တယ်ဆိုတာပဲ..။
ကျွန်စနစ်တော်လှန်တဲ့..စပါတာကတ်(Spartacus) (c. 109–71 BCE) ) ရဲ့ဘေးကနေစစ်အတူတိုက်တဲ့.. အင်မတန်စွမ်းတဲ့ ဂလက်ဒီရေတာ ၂ယောက်(Agron နဲ့ Nasir )က ဂေးလို့ဆိုတာပဲ..။
မိမိနှင့်မတူ.. (လူတန်းစားမတူ) ဟု နှိမ်ချဆက်ဆံသူများကိုသာ ရှုံ ့ချပါသည်။
အများညီက.. အခြောက်ကို ဂေးဟုဖတ်…။
ရောမခေတ် စစ်ထွက်တော့ လိင်တူဂျင်းချတာ ရှေ့တန်းမှာ ဆော်စရာ မိန်းမ မရှိလို့၊ ဒါမှမဟုတ် ခွင့်မပေးရင် အနီးအနားရွာက မိန်းမတွေ ဓါးစာခံ ဖြစ်မှာစိုးလို့လေဗျာ..။ ဒီခေတ်ကြီးမှာ အဲလောက် ချစရာ ရှားလား…။ အလဂါး ဠီးဇိမ်ခံဂျင်တာ များနေဒယ်..။ စစ်တပ်အတော်များများမှာ မိန်းမတွေတောင် အမှုထမ်းနေဂျပီ..။ အနောက်တိုင်းသားဆိုတာ ရှေးပဝေသဏီထဲက အသစ်စမ်းချင်တယ်၊ စွန့်စားတယ်၊ အစဉ်အလာဖောက်ထွက်ချင်တယ်.. ဒီတော့ လိင်တူဂျင်းချ ဇိမ်ခံတာ မဆန်းဘူး.. အရှေ့တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုကြတော့ မတူဘူး..။ လိင်တူသမားတွေကို လူသားဂျင်း စာနာပါတယ်.. လက်မခံနိုင်တာ ပညာရှိ ကိုစံလှဂျီး၊ ပရောဟိတ် ကိုစည်သွပ် တို့ပြောသလို လိုက်ဆွယ်နေတာကိုပဲ..။ အက်ရှင်တိုင်းမှာ ရီအက်ရှင်ရှိတာမို့ သဂျီး၆ရင် ကျုပ်တို့က ထောက်ရမှာဘဲ.. ဒါသမိုင်းပေးတာဝံ….
မားခိုမ်တို့ အကျိုးပေးကောင်းပုံ …
Totally, Absolutely, Definitely Agree……..!!!!
မြင့်မြတ် ဆိုဒါရော သိဘာဒလား မမဂျီး ခညား …
မြင့်မြတ် ဆိုဒါ နံမယ်နဲ့လည်း ဆိုင်ဘာဒယ် …
ခလေးတွေတောင် မြင့်မြတ် ဆိုဒါ ဘာလဲ သိဒယ် …
မယုံရင် တွားမေးကျိ …
​ဂေး တို့၏ မာယာ
ကျွန်​​တော်​ ​နောက်​​ရေးမယ်​့ပို့နာမည်​ကို ဝင်​​ကြော်​ငြာတာပါခင်​ဗျာ
ပင်လယ်နှင့် တူသော ယောကျာ်း တစ်ယောက် says:
သများ ချစ်သော သူငယ်များ
ဂေးတို့၏မာယာပြီးရင် ရေးပါ နော်
ယောကျာ်းလေးအများအားဖြင့်က ဖြစ်သလိုနေတတ်ကြပေမဲ့ တချို့ကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကို သပ်သပ်ခပ်ခပ် နေတတ်ကြတယ်
ဦးပါ ပြောသလိုပါတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ခြောက်တောက်တောက် ဖြစ်ပေမဲ့ ပြု့ပြင်လို့ကောင်းသွားတာ
ကျနော်လဲကြုံဘူးပါတယ် အလယ်တန်းကျောင်းသားဘဝတုန်းက ဝင်းသိန်းထူး ဆိုတဲ့
သူငယ်ချင်းတယောက်ရှိခဲ့ဘူးပါတယ် သူ့အိမ်နားမှာအခြောက်ရှိတော့ အခြောက်တွေကိုအားကျပြီး
ခြောက်တောက်တောက်ဖြစ်ချင်နေတာ ကျတော်တို့သူငယ်ချင်းတွေက ဘတ်စကက်ဘောကစားယင်
ခုဆိုပြည်မြို့ မှာကားဂိတ်မှူးဖြစ်လို့ မိန်းမနဲ့ ခလေးတွေနဲ့အဆင်ပြေနေပါရောလား….
ငွေကြေးသာ နဲနဲ တတ်နိုင်ရင်
ဟိုမုန်းအချိုးအဆကို ချိန်ဆ ပြောင်းလဲပေးပြီး
တကယ်မစိတ်ပေါက်သူတွေကိုတောင် ကျားကျားလျားလျားဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်နေပြီလို့ ကြားသိရပါတယ် ကိုရင်မောင်ရေ..။
ဒီလိုလူမျိုးတွေ နည်းသွားမယ် ဆိုတာကို
နောက်ထပ် နောက်ထပ် တက်လာမယ့် ကွန်မန့်များကို မျှော်လိုက်ပါဦးမဗျ
မိန်းမကောင်းလေးလိုပဲ နေတတ်ထိုင်တတ်သွားမယ်။ လူကြားထဲ အဆင်ပြေမယ်။ လူဝင်ဆန့်မယ်။ သူ့ဘဝ ကောင်းတာပေါ့..။
​ဂေး တို့၏မာယာ ကို တင်​ပြီးပါပြီ​
​နောက်​ထပ်​ ဆက်​လက်​ ထွက်​​ပေါ်လာမည်​့ပို့စ်​များမှာ ​အောက်​ပါအတိုင်​းဖြစ်​ပါ​ကြောင်​း ….
ကျွန်​မ ကိုက်​မိ အပြစ်​ရှိသည်​ ​မှောင်​
ကြာ​တော့သည်​လည်​း ​ဂေး စကားး
စသည်​ ..စသည်​ …..
ကြော်ငြာတွေ မြဝတီနဲ့ နင်လားငါလားပါလား ကိုရင်ရာမည ရဲ့ ….
Comment ရေးရင်း ရေးရင်းနှင့် အရမ်း အရမ်းကို ရှည်သွားလို့ ၊
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၈ ) ( LGBT ) ဆိုပြီး ၊
ကျနော် Post တင်လိုက်ပြီ ။ ဟီ ဟိ ။
ဒီပိုစ့်မျိုးမှာ ကွန်မင့်ရလိမ့်မယ်လို့ ထင်ကိုမထင်ထားဘူး…
သရုပ်ပျက် အဆင့်အတန်းနိမ့် အခြောက်တွေ အခုနှစ်ပိုင်းမှာ ထကြွသောင်းကျန်းနေပြီး
အခြောက်မဖြစ်သေးတဲ့ ကလေးသူငယ်/လူငယ်လူရွယ် ခပ်နွဲ့နွဲ့လေးတွေကို
မီဒီယာ အပါအဝင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဆွဲဆောင်ပြီး
အခြောက်ဇတ်သွင်း ကြတာတွေ တော်တော်ကို များလာလို့ပါ…။
(အခြောက်ဇတ်သွင်းပုံအကြောင်း တယောက်ယောက်က ဖေါ်ကောင်လုပ်သင့်ပါတယ်)
အခြောက်တွေက အစကတည်းက ပရိယာယ်ကြွယ်ဝပါတယ်။
(အခြောက်တို့ရဲ့ ပရိယာယ်တွေကိုလဲ တယောက်ယောက်က ရေးပြသင့်ပါတယ်)
အဲဒီပရိယာယ် (နည်းဗျူဟာ)တွေ ရဲ့ ကနဦး ရည်မှန်းချက် ရှိပါတယ်…
အစ …. ဆိုပါတော့…
ဘယ်က စ သလဲ ဆိုတော့-
သူတို့ကိုသနားအောင်လုပ်ရာက ၊ လူတွေရဲ့ကရုဏာစိတ်ကို လှုံ့ဆော်ရာက စ ပါတယ်….
ဒါလောက်ကို သတိထားမိရင် –
အူးလေးပါပါရေ..။ ကိုရင့် မျက်စိရှေ့မှာ ကိုယ်တွေ့ရပ်ကွက်ထဲက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရိုးသားအေးဆေးစွာ
နေရင်းနဲ့ ဆံပင်သွားညှပ်ရာက ဆံပင်ညှပ်တဲ့အခြောက်တွေနဲ့ သွားပေါင်းလိုက်တာ
မည်သို့လုပ်လိုက်သည်မသိ အခြောက်ဖြစ်သွားပါတယ်… စိတ်မကောင်းပါဘူး
နောက်ပိုင်းလဲ ရပ်ကွက်ထဲက ကောင်လေးတွေပါ အဲ့ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ကနေ အခြောက်တွေပွားပွားလာပါတယ်..။
အခြောက်တွေဆိုတာ မိန်းမရဲ့ ပလီပလာစိတ် ယောက်ျားရဲ့ မူယာမာယာပေါင်းပီး
သူငယ်လေးတွေ ဘာကိုလိုအပ်လဲ ဘယ်အချိန်မှာ တောင်းလို့ရမလဲ.. (အထူးသဖြင့် အရက်မူးချိန်)
အဲ့လိုယုတ်တဲ့ ကောင်တွေများတယ်။ သဌေးနိုင်ငံတွေနဲ့တော့ နှိုင်းမပြောနဲ့ပေါ့ဗျာ..။ ကိုယ့်အိုးနဲ့ကိုယ်ဆန်
တော်တဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို အဓိကထားပြောသင့်တယ်။
ရွာကအခြောက်တွေက ဒုစရိုက်ကျူးလွန်ဖို့ လက်မနှေးသလို
သူငယ်ထားရမှာ သူငယ်ကိုလိုင်းပြန်သွင်းတာတွေနဲ့ အင်အားချဲ့နေတာကို
လူငယ်များအဓိက သတိထားစေချင်လို့… (စေတနာဒေါဖြင့် ရွာထဲက အခြောက်များအား ဝေဖန်ချက်များ ဖော်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။) အခြောက်ဟာ အခြောက်ပါ.. သာသနာတော်မှာတောင် အခြောက်ကို မြင့်မြတ်တဲ့ ရဟန်းပြုခွင့်မပေးပါဘူး။
ဒီတော့ဒီတော့..အဲ့လို အခြောက်တွေကို မြင့်မြတ်တယ်လို ဆိုချင်ရင်လဲ မြတ်စွာဘုရားထက် တစ်လများကြီးနေကြမလား
ဟုတ်ပါ ကစည်သွတ်… ကျုပ်လည်း တွေ့ဖူးတယ်.. အခြောက်အငုံးအဖူးလေး နုထွတ်နေတာပဲ အရိုင်းလေးပေါ့ဗျာ..။ နည်းနည်းထတဲ့ အရွယ်လဲရောက်ရောက် ငဖြိုးတို့လို စီနီယာ ဂျော်လကီများ လိုင်းသွင်းပေးလိုက်တာ သောက်ကျိုးနဲ အခြောက်အဌာရသ ၁၉ရပ် စုံစေ့အောင် တတ်သွားပါရောလား…။ ဒင်းတို့ အင်အားတိုးပွားအောင် လိုက်ဆွယ်သဗျ..ဒါနဲ့ မခြောက်တခြောက်တွေ ခြောက်ကုန်ရော… သိတဲ့အတိုင်း ဆယ်ကျော်သက် စကောစက အရွယ်မှာ မိန်မလျာစိတ် ဝင်နေရင် အရွယ်ကလဲ ကာမစိတ် ထချိန်ဆိုတော့ အလွယ်လိုင်းမိတတ်တယ်.. အဲဒီလောကထဲ ဝင်မိရင် ပျံထွက်ဖို့ မစဉ်းစားနဲ့တော့ ဘိန်းစွဲတာထက် ပိုဆိုးတယ်။ ကျုပ်ကတော့ ပြောထားသလိုပဲ ယောက်ျားသဘာဝ ရဲတင်းမှုနဲ့ မိန်းမသဘာဝ စိတ်ခံစားမှု ပြင်းထန်ခြင်း ပေါင်းစပ်နေတဲ့ အခြောက်တွေကို လန့်တာအမှန်ပဲ…။ မိန်းမတယောက် ဘယ်လောက် ပွင့်လင်းတယ်ပြောပြော လမ်းဘေး သေးမပေါက်ရဲဘူး.. ယောက်ျားကတော့ အနာ္တရာယ် မလွယ်နိုင်ရင် ဘာကောင်ဖြစ်နေနေ ပေါက်စရာရှိတာ ပေါက်မှာပဲ… အခြောက်ကတော့ နွဲတာရော ကြမ်းတာရော နှစ်ပင်လိမ်တယ်။ စည်းမစောင့်တတ်ဘူး သဘာဝကိုယ်၌က… ကျုပ်တို့ သဂျီးလိုပေါ့… လူရှေ့သူရှေ့သာ အယ်ဒီတာဂျုတ် ဘာညာလုပ်နေတာ ပိုက်ဆံလဲတွေ့ရော ကုန်းကောက်တာပဲ… လူရှေ့သူရှေ့ ဟန်မဆောင်နိုင်..
ဟုတ်လား ကိုကြောင်ကြီး သဂျီးက အဲဒီလောက်တောင် အခြေအနေ ဆိုးနေပြီလား။ ဒါကြောင့် ခုတလော သူပြောနေတာတွေ ထူးတော့ ထူးဆန်းတယ်လို့ တွေးမိသား။ ယောကျာင်္းစင်စစ်ကနေ မိန်းမဘဝကို ပြောင်းသွားတဲ့ လူပုံကို ပြပြီး တဘဝတည်း စည်းစိမ်နှစ်မျိုး ခံစားနိုင်တာ နည်းတယ်မှတ်လို့ ဘာညာလို့ သူအားကျသလိုလို ဘာလိုလို ပြောနေတာကိုး။
အော် လက်စသတ်တော့ ဒါကြောင့်ကိုး။
လိုင်းသွင်းခံရပြီး ခြောက်သွားသူတွေ အရမ်းများလာတယ်ဗျ..
အရင်က အဲသလို လိုင်းသွင်းခံရတာဆိုတာမျိုးက
နတ်ကတော်အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ အလှပြင်ဆိုင် အသိုင်းအဝိုင်းမှာပဲရှိတာများတယ်..
အခုက ရပ်ကွက်တွေထဲ ရောက်လာတာ..
ကိုပါ … ကိုပါ ….
ဒါလဲ အတွင်းကျကျ သိနေတာဘဲ ကလား။
မောင်ဘလှိုင် ပွဲတောင်းသလို ” ခဲ နဲ့ လိုက်​​ပေါက်​တဲ့အ​ကြောင်​း​လေး” လဲ မျှပါဦးလေ။
အတိတ်မှာ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် လက်ရှိ မှာ ရွာထဲကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဝင်လာပြီး “အများကို မထိခိုက်အောင်” ရေးသားသော သူ မည်သူ ကိုမဆို
လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ကျား၊မ၊ ဂေး၊ လက်စဘီယန် မရွေး ကြိုဆိုပါကြောင်း။
ကကြောင်ကြီးတို့၊ ကိုရင်စည်လေး နဲ့ ကိုရင်စံကြီး တို့လဲ သူတို့ ဆီက ရလိုက်တဲ့ ခါးသီး တဲ့ အတွေ့အကြုံ လေးများ ကိုလဲ မျှပါဦးလား။
အရီး ရဲ့ မောင် တစ်ယောက် ကတော့ သူ့ကို သူတို့ကျောင်းက မိန်းမစိတ်ပေါက်နေတဲ့သူတစ်ယောက် ရီးစားစာ လိုက်ပေးတာခံရပြီး ကထဲ က သူတို့ ကို တွေ့ရင် ဆွဲထိုးဖို့ လုပ်နေတော့တာဘဲ။
အင်မတန် ဒေါသကြီး နေခဲ့တာ မို့ “ဘာဖြစ်လဲ ကိုယ့်ကို ချစ်လို့ ဘဲ” လို့ ပြောတော့ အဲဒီသူက သူ့ကိုလဲ သူတို့ လို စိတ်မျိုးပေါက် နေတယ် မှတ်ပြီး အထာပေးတာ မို့ ဒေါသဖြစ်နေတာလို့ ပြောတာဘဲ။
ဒါပေမဲ့ ကျုပ် မောင်လေး ကတော့ ကျား အစစ်လေးပါ။
ကိုရင်စည်လေး ပြောသလို သူ့စည်း ကိုယ့်စည်း ခြားထားရင် ပြသနာ မများလောက်ပါဘူး။
မဟုတ်ဘဲ တလွဲ ဘာသာပြန် မိရင် တော့ လက်သီးစာမိ ရင် လဲ ခွင့်လွှတ်ကြပေတော့။
ကိုရင်တို့ ကလဲ ကိုယ့်ကို အနှောက်အယှက်မပေးဘဲ သူ့ဟာသူ ရင်ဖွင့်စကား ပြောနေတာမျိုး ကိုလဲ ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ။
လွန်လွန်ကျူးကျူး မသင့်တော်တဲ့ စာတွေ တင်ရင်တော့ ဘယ်သူမဆို (သူကြီး အပါအဝင်) ကို မော့မော့ တွေက ကြည့်မနေပါဘူး။
အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်တွေ နိုးကြားလာကြတာ ဖြစ်မယ်..
အခြောက်လိုက်လို့ ပြေးရတာလေးအကြောင်းရော မကြားချင်ဘူးလား…
တကယ့် ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်တွေနော …
” လွန်လွန် ကျူးကျူး မသင့်တော်တဲ့ စာတွေ တင်ရင်တော့ ၊
ဘယ်သူ မဆို ( သူကြီး အပါအဝင် ) ကို ၊
မော့မော့ တွေက ကြည့်မနေပါဘူး ။ ပိတ်ခံရမှာပါဘဲ ”
ဟယ်ယ်ယ်ယ်ယ် ၊ ကြည့်စမ်း ၊ ကြည့်စမ်း ( သူကြီး အပါအဝင် ) တဲ့ ။ ဟဲ ဟဲ ။
ဒီ မော့မော့ ဆိုတာတွေက ၊ အာဏာပြင်းလှချေလားကွယ် ။
မော့မော့ တွေ ပေါင်းပြီးများ ၊ သူကြီးဆီက အာဏာသိမ်းလိုက်ကြပြီလားမသိ ။
ငါတို့ သူကြီးလေး ၊ သနားပါတယ်ကွယ် ။ ဟီ ဟိ ။
ခရစ်စတယ်လှိုင်းဂလေးဆီဂ အခြစ်ရဖို့ဆို ဦးကြောင် အ၆လုပ်ဝံ့တယ်… ခံဝံ့ဒယ်အပြောဗူးနော်… သေချာဖတ်…
ရွာထဲက ညီအကိုတော်များ အားရပါးရ ဝိုင်း ဘေနေကြတာမြင်လို့…
မောင်ကျောက်ရဲ့ “ခြောက်မှုရေးရာ ခြောက်မာယာ” ဆိုတဲ့…
ရေးပြီးသားပို့စ်လေးကို မတင်တော့ပါဘူး… ဟီ ဟိ
ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် အလွမ်းဇာတ်ထွင်ပြီး ရွာထဲမှာ ခြောက်သာသနာလာမပြုပါနဲ့လို့…
အဲ့ဂလိုတော့ မလုပ်ပါနဲ့ ဦးကျောက် ရဲ့…ကိုယ့် ဗာရှင်းနဲ့ကိုယ်ပေါ့ …ခေတ်စားနေတုန်းလေး .. တင်လိုက်ပါ.. အားပေးနေပါတယ်
…ခြောက်မှုရေးရာ ခြောက်မာယာ… တင်လိုက်တော့ဗျို့
ပြောင်းဖူးယူမလား ရေသန့်ယူမလား ကြိုက်ရာကိုရွေးလိုက်ဇမ်းဘာ … ခိခိ
လူတယောက်ရဲ့ စိတ်က အဓိက ကျမှာပေါ့ ။ ပတ်ဝန်းကျင်က အရက်သောက်တိုင်း အရက်သမားဖြစ်သွားတဲ့သူရှိသလို မသောက်နိုင်တဲ့သူလည်း ရှိတယ်။
လူတော်တော်များရဲ့ စရိုက်က ဗီဇနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ဆွဲခေါ်သွားတာမျိုးပေါ့ ။
တခု သတိထားရမှာက နုငယ်တဲ့ အသိဉာဏ် အသက်ရွယ်မှာ သိမ်းသွင်း ကျူံးသွင်းခံခဲ့ရတဲ့သူတွေ ဆိုရင်တော့ သူတို့ အနေနဲ့ ဘဝဆုံးတယ်ပေါ့။ မဖြစ်အောင် တားနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါ။
သို့သော် သူတို့ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ဗီဇကိုက ဒီစိတ်နဲ့ မွေးလာတာဆိုရင်တော့ ဘယ်သူမှ တတ်နိုင်မယ် မထင်ဘူး။
ကိုယ်တိုင် မရှုံ့ချခဲ့သလို အားပေးတာလည်း မရှိခဲ့ပေမဲ့ ဘယ်အရာကီုမှတော့ လွန်လွန်ကျူးကျူးလက်ခံလို့ မရသေးဘူး။
ဒီက တချို့တချို့သော gay တွေ ( အိန္ဒြေရှိ သော gay များမပါ ) အစဉ်အဆက် အိန္ဒြေမရဖြစ်နေတာကလည်း ကျမတို့ ပတ်ဝန်းကျင် လူ့အသိုင်းဝိုင်းရဲ့ ဆက်ဆံပုံကြောင့် တစိတ်တဒေသ တော်တော်များများပါဝင်နေပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာ မျက်စိရှေ့တင် အခြောက်တွေကို ပါးစပ်သရမ်းနေတဲ့ ယောက်ျားအစစ်တွေကိုလည်း တွေ့ဖူးလို့ပါ။
ကျိုက်ထီးရိုး မှာ တခါက gay အဖွဲ့တွေ အားကျိုးမာန်တက် ဝေယျာဝစ္စလုပ်နေတာကို
အားမနာပ နောက်ကနေ ယောက်ျားရင့်မာကြီးတွေ ဖြစ်ပါရဲ့ မတော်မတရားပြောနေတာကိုလည်း နားနဲ့ ဆတ်ဆတ်ကြားပြီး မြင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
အစွန်းကို ရောက်နေတဲ့သူတွေ တွန်းချခံရတော့ မှီရာလှမ်းဆွဲရင်း ကို့ရိုးကားယားပုံစံတွေနဲ့ တွဲလောင်းခိုထားသလို မြင်မိလို့ပါ။
အိန္ဒြေမရနှောင့်ယှက်တတ်သူ gay များကို ထိုက်သင့်တဲ့ အရေးယူမှုပေးတာမျိုးကိုတော့ ကြိုဆိုပါတယ်။
အလို … တယ် …
ဘူများလဲ မှတ်ဒယ် …
ဘေးက ကွန်မန့်ထဲမှာ ဂျီးဒေါ်နံမယ်ဂျီး တွေ့လိုက်လို့
ဝမ်းသာအားရနဲ့ ပြေးပီး လာကျိလိုက်ဒါ … ဟဲဟဲ …
ဖျားနေလို့ အလွမ်းဓာတ်ခံကလည်း ရှိနေလို့ ရောက်လာတာလေ။
နေကောင်းသွားရင် နေ့စဉ်ဘဝကြီးထဲ ပြန်ရောက်အောင်သွားရမှာ :-(
မမယ်ပုကို မတွေ့တာတောင်ကြာပြီ။ တောင်တက်ကနေ ပြန်ရောက်လာပြီပေါ့။ တောင်တက်အတွေ့ အကြုံလေးတွေ မျှပါဦးနော်။ ရွာထဲမှာ ရွာသားတွေ အားကောင်းနေတယ် သိလား။ ရွာသူတွေ နည်းနေတယ်။ တကယ်လို့သာ သူတို့ချည်းရှိနေမယ်ဆိုရင် (ရွာသားတွေချည်း) သူတို့ ဘာအကြောင်းတွေ ဆွေးနွေးကြမယ်လို့ ထင်သလဲ။ တိုင်းရေးပြည်ရေးတွေများ ပြောကြမလား။ ဒါမှမဟုတ် ခလေးသူငယ်အရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး တွေများ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြမလား။ တွေးကြည့်ရင် စိတ်ဝင်စားစရာပဲနော်။
ဦးပါရေ – ဆိတ်မဆိုးပါနဲ့။ မမယ်ပုကို တွေ့လို့ နှုတ်ဆက်တာပါ။
ဟုတ်တယ်ဗျ။ ကျနော်တောင် မ pooch ကိုကွန်မန့်တောင် မတွေ့တော့လို့ စဉ်းစားနေသေးတယ်။ ကိုမိုးတိမ်ဆိုတဲ့ လူတယောက်လည်း မတွေ့တော့ဘူး။ အရင်တုန်းက ကျနော် သိပ်သဘောကျတဲ့ မိန်းကလေး ကလောင်ရှင် တယောက်လည်း ပျောက်သွားတယ်။
တွေ့ဖူးတဲ့ ဂေးတစ်ချို့ကတော့ မိန်းကလေးလိုအယုအယ၊ ဦးစားပေးခံချင်၊ နွဲ့ဆိုးဆိုးချင်….
သူနိုင်ကိုယ်နိုင် ရန်ဖြစ်ရပြီလားဆိုရင် မိန်းမရဲ့ နှုတ်သီးကောင်းရှာပါး အားမနာပြောတတ်တာ၊ ယောက်ကျားခွန်အားသုံးရန်ဖြစ်တတ်တာ….. တောက်ကောင်းတစ်ကွက်မှ မရှိပါဘူး…
ဦးပါ ရေ သားမီး လေး (၂) လဲ မျှော်နေပါတယ်
အကြောင်းအရာ တစ်ခု ကို မြင်ပါ ကြားပါ များလာရင် အမှန် ထင်လာတတ်တယ်
ကိုကြောင်ကြီး ခဏခဏ ရေးပုံထောက်ရင် သူကြီးက တကယ်လား မသိ